3D Stereoscopic For ATI GPUs - MYSTERY ZILLION
3D Stereoscopic For ATI GPUs
August 2011 edited August 2011 in My Article
3D Stereoscopic Effect သိကြမယ်ထင်ပါတယ် ။ :-D
ကျွန်တော်တို့ တစ်ဖက်က အနီ တစ်ဖက်က အပြာလိုလိုအစိမ်းလိုလို မျက်မှန်ကြီးတပ်ပြီးကြည့်ရတာလေ။
ကြည့်လို့ကောင်းတယ် .. တစ်ခါတစ်ခါ 3DModel တွေက အပြင်ကိုတောင် ထွက်လာသေး ..
ကဲ .. အဲလိုမျိုးနဲ့ ဂိမ်းဆော့ချင်ပါသလား .. Nvidia အတွက်တော့မပြောတော့ပါဝူး .. သူက သူ့Driver ဆွဲလိုက်ရင်ပြီးတယ် .. အခု ATI(AMD) GPU User တွေအတွက်ပြောချင်တာပါ ။။
AMD က Nividia လို Stereo 3D ကို ကိုယ်တိုင် Enable လုပ်နိုင်တဲ့ Driver မထုတ်ပေးခဲပါဝူး ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ATI Radeon HD အတွက် third-party drivers တွေကိုသုံးရပါမယ် ။။
အကောင်းဆုံးကတော့ iZ3D ပါ .. Configuration လုပ်ရတာလွယ်တဲ့အပြင် ဈေးကြီးလွန်းတဲ့ 3D Tool Kit တွေတင်မကပဲ ဈေးပေါတဲ့ Anaglyph ကိုပါ Support လုပ်ပါတယ် ။။ 3D Kit တွေကတော့ ပြောမနေနဲ့တော့ အလန်းပေါ့ .. ဒါပေမဲ့ လည်း ၀ယ်ဖို့မတက်နိုင်တော့ Anaglyph လေးနဲ့ပဲ အာသာဖြေရတာပေါ့ .. ဟဲဟဲ :-D
အခု ဒီ Driver လေးကို ဒေါင်းလိုက်ပါ .. ပြီးရင် anaglyph မျက်မှန်လေးတစ်လက်ပဲလိုတယ်
ဒါကလည်း ပန်းဆိုတန်းမှာသွား၀ယ်နိုင်ပါတယ် .. ကျွန်တော်၀ယ်တုန်းက ၆၀၀၀ လားပဲရှိတယ်
ဒါဆို ok ပါပြီ .လုပ်နည်းမသိရင်မေးနိုင်ပါတယ် .. Driver လေးကို သွင်းပြီးရင် Enable လုပ်လိုက်တာနဲ့ ဘာမှမဖြစ်ပါဝူး ဂိမ်းထဲကို၀င်မှာ သူက အလုပ်လုပ်တာပါ .. Anaglyph ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း နည်းနည်းတော့မှောင်တာပေါ့ .. အော် ပြောပါတယ် အဖြည်ခံလေးပါဆို ..
ဒါပေမဲ့နော် .. တကယ်ကို မိုက်တာ .. အရုပ်တွေကြွနေတာ ..ရှယ်ပဲ ကျွန်တော်ကတော့ Resident Evil5ကိုဆော့တာ ..တော်တော်ကြိုက်သွားပြီဗျာ ..
ကဲကဲ လေရှည်နေတာများသွားပြီ ဟီးဟီး
http://www.iz3d.com/select_download ဒီမှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ် ..
Select your Device or Output မှာတော့ Anaglyph ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ .. ဆိုဒ်သေးပါတယ် ။။
ကဲအဆင်မပြေရင် ပြောနော် ။။
ဒါနဲ့ကြုံတုန်းပြောလိုက်ဦးမယ် .. ကွန်ပြုတာသာမြင့်နေရင် Wii ဂိမ်းတွေကိုလည်း Game စက်မ၀ယ်ပဲ ကွန်ပြုတာမှာ ဆော့လို့ရနေပါပြီ . ( မသိသေးသူများအတွက် ) :-D